कुत्तों को अंग्रेजी नस्लों। अंग्रेजी रानी को कुत्ता नस्ल
घर र परिवार, शिक्षा
संसारको लगभग सबै देशहरू कुत्तहरुको आफ्नै अनन्य जातिको निर्माणमा भाग लिइन्। तर यस अर्थमा बेलायती विशेष गरी "उत्पादक" थियो। आज, कुकुरका थुप्रै अंग्रेजी प्रजातिहरू सफलता हुन्। चलो सबैभन्दा लोकप्रिय संग परिचित हुनुहोस्।
सुन्दर र मित्रवत, बच्चाहरु संग पुरा तरिकाले सहज - यो कुकुर को मुख्य विशेषताहरु हो।
कुकुर प्रजाति अंग्रेजी सेटरले एकदमै स्मारक उपस्थिति छ। सेटर एक सुरुवात गरिएको कुकुर एक सुन्दर असर संग। पशुको ऊन एक विशेषता मोटो रंगको रङ संग धेरै लामो र घनी छ। यो पूर्ण सीधा वा थोडा भिडन्त हुन सक्छ।
एक जना विशेष अनुग्रहको साथ एक जनावर चल्छ, तर अंग्रेजी सहरहरू धेरै हिँड्ने कुकुरहरू तेज तेज स्वादमा छन्। सबै पछि, तिनीहरू विशेष रूपमा शिकारको लागि बाहिर गए।
क्यारेक्टरको बोल्दै, अंग्रेजी सेटर बच्चाहरूसँग परिवारको लागि आदर्श हो। कुकुरहरू धेरै सजिलो हुन्छन् र ती मानिसहरूप्रति अजनबीहरूको घरमा आउँछन्।
यो कुत्तेलाई सुरू नगर्नुहोस्, यदि तपाईं आफ्नो अधिकांश समय घरबाट टाढा जानुहुन्छ भने, किनकि तिनीहरू केवल एक व्यक्तिसँग लगातार सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ। बसोबास धेरै खराब हुँदै निष्ठा पीडित हुन्छन्। साथै, पिजेको लागि पशु पूर्ण रूपमा अनुपयुक्त छ।
त्यहाँ यहाँ कुनै विशेष समस्या छैन। सम्झनुको मुख्य चीज हो कि कुकुरहरूको अंग्रेजी प्रजाति प्रायः शिकारीहरू हुन्, र बस्तीहरू कुनै अपवाद छैन। यही कारणले पशुलाई लामो दैनिक हिडाइ चाहिन्छ, किनकि कुत्ते बिना पट्टाले चल्न सक्छ। केवल यस अवस्थामा तपाईंको पाहुनाहरू स्वस्थ र स्वस्थ हुनेछन्।
पशु को कोट विशेष हेरविचार चाहिन्छ। सेटर दैनिक समस्यै पर्छ, जुन भ्रमबाट बचाउन सकिनेछ। आवधिक रूपमा, कुत्तेलाई काम गर्न र पस्न आवश्यक छ, प्याड बीचको कपाल काटेर।
कुकुरको अर्को प्राचीन अंग्रेजी नस्ल, जुन शिकार र प्रदर्शनीको रिंगमा राम्रो देखिन्छ।
ग्रेहाउन्ड शिकार शिकार ग्रेहाउन्ड कुत्ताको अंग्रेजी संस्करण हो । प्रारम्भिक रूपमा, पशुहरूलाई मात्र शिकारको लागि उद्देश्य थियो, तर पछि तिनीहरूले कुत्ते दौडमा पटरिहरु लिए। हिंडको खुट्टाको शक्तिशाली र पूर्ण विकसित माटोले तिनीहरूलाई ठूलो स्प्रिन्टर्स बनाउँछ।
नस्लका प्रतिनिधिहरू धेरै मित्रवत छन्। कुत्तहरू एक शांत स्वभाव छ, जसले तिनीहरूलाई कुकुर संसारका अन्य प्रतिनिधिहरूसँग सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ। ग्रेहाउन्ड हाउस सुरू गर्ने निर्णय, यो तिनीहरूको प्राकृतिक शिकार प्रकोपलाई विचारको लायक छ। यही कारणले गर्दा साना जनावरहरू (बिल्लियों, सजावटी खरगोश वा चिन्चिल) राम्रो तरिकाले शिकारको वस्तु बन्न सक्छ।
ब्रिटिश ग्रेहाउन्ड बुद्धिमानी र अनुकूल जनावरहरू हुन्, विशेषगरि ती व्यक्तिहरू जसले आफ्ना स्वामीहरूसित संलग्न हुन्छन्।
अंग्रेजी ककर स्पानील
कुकुर नुस्खा कर्कर स्पेनील अंग्रेजी - एक जना धेरै शिकार नस्ल। सामान्यतया, किकरहरू बुद्धिमान, जिज्ञासा र स्वर्गीय जनावरहरू हुन्। कुकुरको प्रभावकारी उपस्थिति, आज्ञाकारी र सजिलो क्यारेक्टरसँग मिलेर त्यसलाई विश्वव्यापी मनपर्छ। यो शायद कुकुरको सबैभन्दा साधारण परिवार हो। स्पेनील अंग्रेजी मालिकहरूसँग धेरै संलग्न छन्, जोनिलोपन सहन गाह्रो हुन्छ। कुकुरले पूर्ण रूपमा अन्य घरेलु पाहुनाहरूसँग सहकार्य गर्दछ र बच्चाहरूसँगसँगै हुन्छ।
नर्सका प्रतिनिधिहरू सजिलै शिक्षाको लागि सुलभ हुन्छन्, तर घरभित्र पिल्लाको उपस्थिति पछि तुरुन्तै यो प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक छ। उसले तुरुन्तै तपाईंको मालिकलाई तपाईंमा चिन्नै पर्छ, त्यसैले तपाईं सानो प्ररिक्टरको शरारत गर्न सक्नुहुन्न। यदि कुक बुझ्छ कि स्वामी सधैं लक्ष्यमा जान तयार छैन, तपाईले वास्तविक घरेलु गल्ती पाउनुहुनेछ।
कुकुरहरू अचम्मका शिकारीहरू हुन्। र यदि तपाईं आफ्नो इच्छित उद्देश्यको लागि कुकुरको प्रयोग गर्ने योजना छैन भने, तपाइँ भर्खरै तपाईंको पादरीको लागि एक वैकल्पिक स्टोरीमा आउन पर्छ। उदाहरणका लागि, यो प्रदर्शनी हुन सक्छ। यदि कुकुर केहि गरिरहेको छैन भने, क्यारेक्टर खराब गर्न थाल्छ। तपाईं पनि भन्न सकिन्छ कि मूर्खता स्प्यानल देखि चुपचाप पागल हुन्छ। कर्सरलाई लामो दैनिक चक्र र उदार शारीरिक गतिविधि चाहिन्छ।
कुकुरहरूलाई विशेष आकर्षणले लामो कान र ऊन दिन्छ। यही कारणले स्पायर्ड्सलाई विशेष हेरविचार चाहिन्छ। दैनिक, कुखुराको कालो हुनुपर्छ किनकि ऊन काँटामा कालो छोरो बिना। यसको अतिरिक्त, उनी नियमित नियमित कपाल कोर्ट गर्न आवश्यक छ।
यो प्रजाति 1650 मा बर्ड गरिएको थियो र एक हारे र एक पक्षी को मैदान मा जमीन मा घबराउन को उद्देश्य थियो। यो नाम कुकुरलाई दिइएको विशेषताको कारणले गर्दा यो तथ्य पत्ता लगाउँदछ जुन यसले शिकार देखाउँछ। अङ्ग्रेजी सूचक अझै पनि सबैभन्दा लोकप्रिय शिकार कुञ्जी बनी रहेको छ।
यदि हामी जनावरको प्रकृतिबारे कुरा गर्छौं भने, यो एक समर्पित जाति हो। कुकुर एक अत्यन्त सन्तुलित स्वभाव द्वारा प्रतिष्ठित छ। प्वाइटर अन्य कुकुरका प्रतिनिधिहरूसँग शान्त छ र अन्य घरेलु पाहुनाहरूसँग मित्रतापूर्ण छ। खास गरी यदि तिनीहरू सँगै बढ्दै गए।
अङ्ग्रेजी सूचकले अजनबहरूको उपस्थितिलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिक्रिया गर्दछ। यो यस्तो घरको घंटी हो, जुन घरमा संदिग्ध शोरको स्थितिमा तपाईले निश्चित रूपमा उच्च स्वरको बारेमा सूचित गर्नेछ।
यस प्रजातिको कुकुरहरू एक सजिलो र घना कपाल छ, जसलाई नियमित रूपमा सफा गर्नुपर्छ। यो प्रेमी नगरपालिकाको लागि उपयुक्त छैन। एक जनावरलाई ठाउँ चाहिन्छ ताकि यसले स्वतन्त्र रूपमा प्रकृतिमा हिड्न सक्छ। यदि तपाईं बिहान जाजहरूको प्रेमी हुनुहुन्छ भने, सर्वोत्तम अनुरक्षण तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुन्न।
यी अंग्रेजी शिकार कुत्तहरूको प्रजाति थिए। र अब हामी अन्य प्रसिद्ध ब्रिटिश मान्छे संग परिचित हुनेछौं।
यूकेमा, मालिकहरू पारंपरिक रूपमा गार्ड कुञ्जीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यो प्रजाति सबै ज्ञातहरूको बीचमा सबैभन्दा ठूलो हो। परिवारको व्यक्तिगत सदस्य 150 किल पुग्छ, तर, यस्ता प्रभावशाली आकारहरूको बावजुद जनावरहरूले उत्कृष्ट निर्माण गरेका छन्।
मौलिक रूपमा नारी शिकारको समयमा प्रयोग भएको थियो, पछि लड्ने कुकुर र अन्ततः, गार्ड कुकुरको रूपमा। यस सबै स्वार्थीको साथमा एक आश्चर्यजनक दयालु र गैर-आक्रामक कुत्ता, विश्वासी रूपमा मालिक र तिनका छोराछोरीलाई मायालु रूपमा प्रेम गर्दछ।
यो प्रजातिको कुकुर उत्कृष्ट साथीहरू छन्, दयालु र सज्जन। तर यहाँ आवश्यक छैन कि तिनलाई जवान बच्चाहरु संग एक्लै छाड्नु पर्छ। यद्यपि कुकुरले सबैले आक्रामकता देखाउँदैन, तर खेलको समयमा यसले गलतीले यसको वजनको साथ पिच गर्न सक्छ।
वेल्ल कोर्गे पम्बोरोक
महानगरपालिकाको जीवन अवलोकन गर्ने प्रेमीहरू प्राय: प्रश्न सोध्छन्: "कुन प्रकारका कुकुर रानी रानी?" यो भर्जिन कोर्गे पम्ब्रो - एक सानो गोठालो कुकुर, केहि हदसम्म च्यानरेल जस्तो देखिन्छ। यदि तपाईं लेजेंन्डलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने, पहिलो रानी कोर्जीलाई परी रानीले मानिसहरूलाई दिइयो।
अंग्रेजी रानी को कुत्तों को पसंदीदा नस्ल को स्वागत कोर्गे पिम्बरोक छ। र यो अब एक गुप्त छैन, किनकि यी कुकुरहरु लाई विंड्सस को शासक घर को साथ आठ दशहरु को लागि पहिले देखि नै छ।
कुकुर धेरै अनुकूल छन्। तिनीहरू बालबालिका र पाल्तु जनावरहरूसँग राम्ररी भेट्छन्, जसले आश्रय र स्वामीलाई माया गर्न बाध्य हुन्छन्। पैदल यात्रामा, तिनीहरू क्यानिन परिवारका अन्य प्रतिनिधिहरूसँग खेल्न खुसी छन् , किनकि तिनीहरू जन्मेको समस्या होइनन्। तर यो सम्झना छ कि स्वीकृति कोर्गे लघु भेडा कुत्तहरुको किस्म हो, यसैले यदि यो बच्चा अर्को कुत्ते द्वारा हिट छ, तब तपाईं आफ्नो बच्चाहरु को सबै महिमा मा देख्न सक्नुहुन्छ। यो मजाकिया फ्याक्स कुकुर पुनरावेदन गर्न सक्षम छ, यो वजन र आकार दुवै भन्दा बढी।
कोर्गी बेकार हुन सक्दैन, तर तिनीहरूले सोफे वा ह्यान्डिंगको क्षतिलाई आफैं आफैलाई मनोरञ्जन गर्दैनन्। तर सानो मोटर, जुन प्रकृति यस कुत्तेमा लुकेको छ, कहिल्यै बन्द हुँदैन। सक्रिय खेलहरू, तिनीहरूको क्षेत्रको सर्वेक्षण, लामो चक्र - कुन कुकुरलाई खुशी दिनुहुन्छ। यसैले, यदि तपाईं वृद्धिमा भारी हुनुहुन्छ भने, स्वीकृति कोर्गेई निश्चित रूपमा तपाइँको कुत्ता छैन।
शाही कुकुरको स्वास्थ्यमा खतराहरू
यो प्रजातिको मुख्य समस्या मोटाई हो। यदि तपाईंको पाल्तुले आवश्यक भौतिक निकास प्राप्त गर्दैन भने, तर एकै समयमा खाईन्छ, सांसको कमजोरी, अतिरिक्त वजन र हृदय प्रणालीको गर्भपात रोगहरू ग्यारेन्टी छन्। यसैले, कुत्ते को क्यालोरी आहार को निगरानी गर्न यो महत्वपूर्ण छ।
अब तपाईलाई थाहा छ कि किस प्रकार को कुकुर अंग्रेजी रानी छ। दुर्भाग्यवश, रूसमा, corgi दुर्लभ छन्।
अंग्रेजी खिलौना स्पेनील
निस्सन्देह, कुत्तों को सबै अंग्रेज नस्लों मास्टिफ को रूप मा शक्तिशाली छ, त्यहाँ साना प्रतिनिधिहरु पनि छन्। तिनीहरु मध्ये एक अंग्रेजी टोयू स्पानीनल हो, जो किंग चार्ल्स II को पसंदीदा हो। कुकुरहरूका पुर्खाहरू अंग्रेजी स्पानीलहरू थिए, जुन 19औं शताब्दीमा पिग र पिगले सक्रियतासाथ अन्तर्वार्ता लिएका थिए। यो तिनीहरूबाट थियो कि जनावरहरूले आफ्नो आकर्षक नाक पाए।
खिलौना स्पेनील - आकर्षक र अनुकूल कुत्ता। आफ्नो मास्टर को लागि बेहद समर्पित, त्यो आफ्नो परिवार संग उनको सारा समय खर्च गर्न उत्सुक छ। उहाँ विशेष गरी बालबालिकाको समाजलाई मनपर्छ। अन्य घरेलु पाहुनाहरूसँग कुकुरहरू ठीक छन्। शांतको लागि धन्यवाद, अंग्रेजी खिलौना स्प्यानिनेको सन्तुलित र अविश्वसनीय स्वभाव आदर्श परिवार साथी हुनेछ।
पिल्ला माथि बढ्दै जाँदा, तपाईंलाई आज्ञाकारीताको सामान्य विचार दिन आवश्यक छ। खिलौना स्पानील धेरै चालाक र सजिलो छ। उसले मालिकको प्रशंसाको योग्यता पाउनको लागि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्नेछ, यद्यपि कहिलेकाहीँ यो धेरै सुन्दर हुन्छ।
कुत्तहरूलाई बलियो शारीरिक निक्षेप आवश्यक छैन, त्यसैले तिनीहरू शहरको अपार्टमेन्टमा राख्नको लागि आदर्श छन्। तर कुकुर साँच्चै छोटो पैदल यात्राको आनन्द लिनेछ।
यो एक पुरा तरिकाले अनूठा छ र कुत्ते को अन्य प्रजाति को विपरीत। अंग्रेजी बुल्डलोग बाह्य भण्डार बरु, एक वर्ग कुञ्जी पनि। पशुको फर छोटो छोटो र धेरै सुन्दर छ। अङ्ग्रेजी बुल्डलोगको विशिष्ट विशेषता डुवको उपस्थिति हो।
एक पटक लडाइँ कुकुर, एक आधुनिक अंग्रेजी बुल्लोग एक अद्भुत साथी हो जुन उनको जीवनको भागको रुपमा घरमा सबै घटनाहरू लाग्दछन्। शोर र धेरै साहसी, एक बुल्लोगले बच्चाहरुसँग घण्टाको लागि खेल्न सक्छ।
कुकुर एक लामो समयसम्म एक्लै रहन सक्दैन। सञ्चारको कमीले उसलाई नैतिक र अनौठो बनाउँछ। र सम्झना, एक बुल्डडोल बल द्वारा केहि गर्न को लागी मजबूर नहीं गर्न सक्छन्, तर यो "राजी" गर्न को लागि यो एकदम संभव छ।
अङ्ग्रेजी बुल्डोगगले लामो हिँड्ने आवश्यकता छैन। यसको विपरीत, बुल्लोगोगहरू अत्यधिक भौतिक उपेक्षाबाट सुरक्षित हुनुपर्छ। यो कुक "सोफा-गार्ड" कुत्तहरूको विशेष नस्ल हुन्छ।
यो कुत्तों को सबै भन्दा लोकप्रिय अंग्रेजी प्रजाति थिए। निस्सन्देह, यी सबै प्रतिनिधिहरू होइनन्, जसको गृहस्थ युनाइटेड किंगडम थियो। यस्तो छोटो कथामा सबै कुरा ढाक्न असम्भव छ।
पेशाले मरियम पप्पिन को थिए? सम्झना गरौं
एक नैनी खोज्नुहोस् के कीवमा यो कठिन हुनेछ?
कसरी परिवर्तन दिन बच्चालाई व्याख्या गर्न सकिन्छ
कुनै पनि कारणको लागि बच्चालाई कसरी क्यान्सर गर्ने? बचपन मनोविज्ञान
जीईएफमा लिङ्ग शिक्षा शिक्षा: आमाबाबु र शिक्षकहरूको परामर्श
Balaclava (क्रिमीआ): गन्तव्यहरू र समीक्षा
केरा, फल को उपयोगी गुणहरू
Teething सर्तहरू के के हुन्?
कम्पनी "रूबल बूम" मा काम: कर्मचारी प्रतिक्रिया
चूहहरुमा बारेमा लोकप्रिय चलचित्र
लाखौं ज्ञात छ जो अभिनेत्री, - "दासलाई Izaura"
औषधि "Duspatalin", प्रयोगको लागि निर्देशन
शहर र यसको सुविधाहरू मा स्वचालित गियरबक्सलाई कसरी सवारी?
घरमा दुर्लभ भिडियो
जम्मा बक्स। बचत मान सुरक्षित मदत